सगरमाथा लाई भारतको दा’वी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारसगरमाथा लाई भारतको दा’वी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सगरमाथा लाई भारतको दा’वी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
काठमाडौं, नेपालबारे पटक–पटक भ्रामक सामग्री स’म्प्रेषण गरेर विवादित बनेको भारतीय च्यानल जी न्यूजले नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबारे भ्र’म फै’लाउने कोसिस गरेको छ। जी न्यूजले सगरमाथा भारतको पनि भएको दाबी गर्दै वि’वादास्पद अभियानको घो’षणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएको अर्को दिन उक्त च्यानलले सगरमाथामा भारतीयले दा’वा ठो’क्नु पर्ने भन्दै सामग्री प्रसारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिने र सगरमाथामा दा’वा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति एकै हुन्- जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरी।
मंगलबार प्र’शारित एक कार्यक्रममा च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको बे’स क्या’म्पमा पुगेर यस्तो अभियानको था’लनी गरेको बताएका हुन्। उनले सगरमाथाको नाम ‘माउन्ट एभरेष्ट’ नभएर ‘माउन्ट सि’कदर’ राख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भारतीय राधानाथ सि’कदरले सगरमाथाको उचाई पहिलो पटक नापेको दाबी गर्दै यसको नाम पनि उनकै नामबाट राखिनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधान सम्पादक चौधरीले नाम मात्र फेर्ने नभएर सगरमाथा माथि भारतले दा’बी गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘माउन्ट एभरेष्टको नाम राधानाथ सि’कदरको नामबाट हुनुपर्छ’, प्रशारित कार्यक्रममा उनले भनेका छन् ‘यसका लागि भारतले अभियान चलाउनुपर्छ, र हामीले विश्वसामु हाम्रो दा’बी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’
प्रशारित कार्यक्रममा पटक–पटक ‘नयाँ भारत नयाँ राष्ट्रवादको सच्चा पत्रकारिता, माउन्ट एभरेष्ट’ को अद्भूत दर्शनको वर्णन’ भनिएको छ। यसअघि पनि जी न्यूजले नेपालप्रति अ’वाञ्छित र भ्रा’मक समाचारहरू स’म्प्रेषण गर्दै आएको थियो। उनी थप्छन्, ‘राधानाथ सिकदर बंगालका प्रख्यात ग’णितज्ञ थिए । उनले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापे । माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नाप्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति थिए । भारतमा त्यसवेला अंग्रेजको शा’सन थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नाम राखिदिए । ए’न्ड्रयु वा जो जर्ज एभरेस्टका उत्तराधिकारीको रूपमा सर्भे अफ इन्डियाको प्रमुख थिए ।
उनले यो शिखरको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिदिए ।उनले दर्शकहरूलाई जी-न्यूजको यो अभियानमा स’रिक हुन र आफ्नो तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् सगरमाथाको नाम परिवर्तनको अभियान चलाउन आ’ह्वान समेत गरे। जी न्यूज नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि आलोचित ब’न्दै आएको छ। भारतमा यो ‘गोदी मिडिया’ का रूपमा आ’लोचित छ। यसैगरी च्यानलले नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चि’नियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच अशिष्ट सामग्री बनाएर प्रशारण गरेको थियो।